अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? यस्तो छ वैज्ञानिकले निकालेको निष्कर्ष - Deshko News Deshko News अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? यस्तो छ वैज्ञानिकले निकालेको निष्कर्ष - Deshko News
अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? यस्तो छ वैज्ञानिकले निकालेको निष्कर्ष
काठमाडौं केही प्रश्नहरु निकै विचित्र हुन्छन् । यो संसारमा कुखुरा पहिले आयो कि अण्डा रु यो हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको विचित्र प्रश्न हो । यस्ता केही अनौठा प्रश्न हुन्छन् जसको जवाफ हामीलाई थाहा हुँदैन । यस्तै प्रश्न हो अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ?
अण्डालाई मांशाहारी खानेकुरा नमान्ने मानिसहरु पनि दुनियाँमा धेरै छन् । अर्थात् कतिपय आफूलाई शाकाहारी भन्नेहरुले पनि अण्डा खाने गर्दछन् । आखिर अण्डा शाकाहारी हो कि मांशाहारी ?
यस विषयमा मानिसहरुले लामो समयदेखि नै बहस गर्दै आएका छन् । तर वैज्ञानिकहरुले यस्तो तथ्य पत्ता लगाएका छन् कि जसले अण्डा मांशाहारी कि शाकाहारी भन्ने बहसलाई अब अन्त्य गरिदिनेछ ।